“Dhiiggiinu Dhulka Ayuu Buuxin Doonaa” – DAACISH oo Digniin Adag U Dirtay Messi Iyo Ronaldo | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
“Dhiiggiinu Dhulka Ayuu Buuxin Doonaa” – DAACISH oo Digniin Adag U Dirtay Messi Iyo Ronaldo
(17-5-2018) Ururka ISIS ayaa mar kale soo saaray digniin ay u dirayaan bahda kubadda cagta ee isku diyaarinaysa inay safar u galaan waddanka Ruushka, halkaas oo uu dhowaan ka bilaabmi doono Koobka Adduunku.
ISIS oo sidoo kale loo yaqaano Daacish ama Dawladda Islaamka ayaa dib usoo cusboonaysiiyey digniino ay dhowaan ku baahiyeen warbaahintooda, taas oo ay dadka uga digayeen inay tagaan waddanka Ruushka.
Xiddigaha Lionel Messi, Neymar, Ronaldo iyo Marco Asensio ayaa ay soo bandhigeen sawirro laga sameeyey iyagoo qoorta laga goynayo, hase yeeshee dhowaanahan waa ay istaageen farriimahaasi illaa laga gaadhayey Arbacadii oo warbaahinta Ingiriisku soo bandhigtay muuqaallada Ronaldo iyo Messi oo qoorta laga jarayo.
Daacish ayaa barteeda Internetka soo dhigtay sawirrada Messi iyo Ronaldo oo ay dhulka jiifiyeen laba nin oo wejiga duuban oo gowracaya.
Sawirradan argagaxa leh ayaa waxa ku dul-qornaa farriin kooban oo ahayd: “Dhiiggiiun dhulka ayuu buuxin doonaa”.
Si kastaba ha ahaatee, Koobka Adduunka ayaa sannadkan laba arrimood oo cabsi gelinaya taageereyaasha, kuwaas oo ah rabshooleyaasha Ruushka ee dhallinyarada u badan oo dhowaan lasoo bandhigay muuqaallo muujinaya inay tababar usii qaadanayaan sidii ay u layn lahaayeen dadka ka imanaya waddamada reer Galbeedka. Arrinta labaad, waxay tahay hanjabaadaha is-daba joogga ah ee ISIS ay soo dirayso, kuwaas oo aan la maylaysan karin waxa ay samayn doonaan.